“Garsoorku waa halbeegga isu-dheelli tirka xiriirka ka dhaxeeya bulshada” – Kalfadhi
“Garsoorku waa halbeegga isu-dheelli tirka xiriirka ka dhaxeeya bulshada”
January 16, 2021 Hassan Istiila
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo hadal ka jeediyay xiritaanka shir-sanadeedka garsoorka Soomaaliya ayaa tilmaamay hufnaanta hannaanka Caddaaladda iyo sarreynta sharcigu inuu yahay tiir muhiim u ah dowladnimada, laguna gaari karo xasillooni iyo horumar taaba qaada.
Shirka oo laba maalmood ka socday magaalada Mogadishu ayaa lagu lafa-guray waxyaabihii garsoorka u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid sannadkii tegay, iyadoo lagu jaangooynayo qorsheyaasha sannadka cusub.
“Sidoo kale, golaha wasiirrada iyo golaha shacabka waxa ay ansiyeen saddex heshiis oo saldhig u ah la dagaallanka musuq-maasuqa, oo kala ah; Heshiiska Qaramada Midoobay ee la dagaallanka musuq-maasuqa, Heshiiska Midowga Afrika ee ka hortagga iyo la dagaalanka Musuqmaasuqa iyo Heshiiska Carbeed ee la Dagaalanka Musuqmaasuqa”.
“Waxaan sidoo kale ku guulaysanay in aan dhisno guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa, oo qayb weyn ka qaadan doona, maamul-wanaagga iyo xaqiijinta cadaaladda” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Madaxweynaha Galmudug oo ka qeyb-galay kulan looga hadlayay qoondada haweenka ay ku yeelanayaan Baarlamaanka
Senator Ayuub “Waxaan ka shaqeynayay sidii aan codka dadkeyga u gaarsiin lahaa fagaarayaasha lagu gaaro go’aamada dalka“